thet naing၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Maleဖျာပုံမြို့ ၊ဧရာဝတီတိုင်းMyanmar Like0members like this
ဘလော့များ (134)ဆွေးနွေးချက်များ (11)အဖွဲ့များ (6)ဓါတ်ပုံများ (32)Photo Albums (2)ဗွီဒီယိုများ thet naing's Likes Thet naing's ၏မိတ်ဆွေများ
အားလုံးကြည့်ရန်... thet naing's Groups
thet naing's Discussions
Started this discussion. Last reply by thet naing Dec 3, 2012.5Replies
သမထနှင့်ဝိပဿနာ သမထတရား သမာဓိကျင့်စဉ်ဆိုတာ သာသနာပမှာလည်းရှိတယ်၊မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းက မြေလျှိုးမိုးပျံနိုင်တဲ့ ဈာန် အဘိညာဉ်ရတဲ့ရသေ့တွေရှိခဲ့ဘူးတယ်၊သမထဆိုတာ သာသနာပြင်ပမှာလည်းတွေ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... သစ္စာ(၄)ပါး အကြောင်း
Started this discussion. Last reply by thet naing Jul 24, 2012.9Replies
thet naing သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
“ယနေ့ ကြွရောက်လာသော ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ဘေးရန် ရောဂါ ကင်းစင်ကွာ၍ ကောင်းကျိုး လိုရာဆန္ဒများ ပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေ”
၄၄၂ဇော်နိုင် commented on thet naing's blog post 'သမာဓိ ဆိုသည်မှာ'"မှတ်သွားပါတယ်ဗျာ"Apr 24♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫ commented on thet naing's blog post 'စင်ကြယ်သော အလှူဒါနဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ'"ကျေးဇူးပါ ။"Apr 18Maung Lwin liked thet naing's blog post 'စင်ကြယ်သော အလှူဒါနဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ'Apr 18thet naing postedablog postစင်ကြယ်သော အလှူဒါနဖြစ်ဖို့ ဆိုတာစင်ကြယ်သော လှူဖွယ်ပစ္စည်းဒီဃနိကာယ်၊ ပါထိက၀ဂ်ပါဠိတော်၊ သင်္ဂီတိသုတ်တွင် အလှူဒါနတစ်ခု၏ စင်ကြယ်ခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်း လေးမျိုးဟောထားပါသည်။၃၁၃။ အလှူ၏ စင်ကြယ်ခြင်းတို့သည် လေးပါးတို့တည်း။ ငါ့ရှင်တို့ အကြင်အလှူသည် (၁) ဒါယကာ ကြောင့် စင်ကြယ်၏၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့် မစင်ကြယ်၊ ထိုအလှူသည် ရှိ၏။ (၂) အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့် စင်ကြယ်၏၊ ဒါယကာကြောင့် မစင်ကြယ်၊ (၃) ဒါယကာကြောင့်လည်း မစင်ကြယ်၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် ကြောင့်လည်း မစင်ကြယ်၊ (၄) ဒါယကာကြောင့်လည်း စင်ကြယ်၏၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လည်း စင်ကြယ်၏၊ ထိုအလှူသည် ရှိ၏၊ (ဤလေးပါးတို့တည်း)။ (၃၉)၎င်းသုတ် အဋ္ဌကထာတွင် (ဒါယကတော ၀ိသုဇ္ဈတိ= အလှူ့ဒါယကာကြောင့် စင်ကြယ်၏) ဟူရာ၌ (ဒါယကော သီလ၀ါ ဟောတိ၊ ဓမ္မေနုပန္နံ ဒေယျဓမ္မံ ဒေတိ = ဒါယကာသည် သီလရှိ၏၊ တရားသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လှူဖွယ်ဝတ္ထုကို ပေးလှူ၏။) ဟု ဖွင့်ဆိုထား၏။(ပဋိဂ္ဂါဟကတော ၀ိသုဇ္ဈတိ = အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့် စင်ကြယ်၏) ဟူရာ၌ (ပဋိဂ္ဂါဟကော သီလ၀ါ ဟောတိ= အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်သည် သီလရှိသူဖြစ်၏) ဟု ဖွင့်ဆိုထား၏။ဆိုလိုသည်မှာ အလှူဒါနတစ်ခုကို ပြုရာ၏။ (က) အလှူပေးပုဂ္ဂိုလ် (ဒါယကာ)၊ (ခ) လှူဖွယ်ဝတ္ထု (ဂ) အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်- ဟု သုံးမျိုးရှိရာ ...(၁) အလှူပေးပုဂ္ဂိုလ်က…See MoreApr 18 1
dimplemit leftacomment for thet naing"ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနဟိတအသင်း၏ (၅)ကြိမ်မြောက် အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ရွက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေသော် …။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977"Apr 16dimplemit leftacomment for thet naing"ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနဟိတအသင်း၏ (၅)ကြိမ်မြောက် အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ရွက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေသော် …။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977"Apr 16dimplemit leftacomment for thet naing"ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနဟိတအသင်း၏ (၅)ကြိမ်မြောက် အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ရွက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေသော် …။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977"Apr 16dimplemit leftacomment for thet naing"ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနဟိတအသင်း၏ (၅)ကြိမ်မြောက် အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ရွက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေသော် …။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977"Apr 16တာတာ liked thet naing's blog post 'သေပြီး ၇ ရက် (သို့) အန္တရာဘ၀၀ါဒ'Apr 9U Tin Zaw commented on thet naing's blog post 'သေပြီး ၇ ရက် (သို့) အန္တရာဘ၀၀ါဒ'"အယူမှန်ဖို့ အရေးကြီးလှပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။"Mar 16Mr.VC liked thet naing's blog post 'သေပြီး ၇ ရက် (သို့) အန္တရာဘ၀၀ါဒ'Mar 16aung aung soe commented on thet naing's blog post 'သေပြီး ၇ ရက် (သို့) အန္တရာဘ၀၀ါဒ'"အသိလေးတွေရသွားတာမို့ ကျေးဇူးပါ"Mar 16ဦးအောင်ကိုး commented on thet naing's blog post 'သေပြီး ၇ ရက် (သို့) အန္တရာဘ၀၀ါဒ'"သေပြီးကြားခံဘ၀ တစ္ဆေသူရဲဖြစ်သည်ဆိုသော အန္တရာဘ၀၀ါဒ သည်မှားယွင်းသောအယူဖြစ်သည်။ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဓမ္မနှင့် ဆန့်ကျင်ဖီလာဖြစ်သော အယူဝါဒဖြစ်သည် ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း လက်ခံသင့်ပါသည်။"Mar 16လင်းကိုကို liked thet naing's blog post 'သေပြီး ၇ ရက် (သို့) အန္တရာဘ၀၀ါဒ'Mar 16whitecolor commented on thet naing's blog post 'သေပြီး ၇ ရက် (သို့) အန္တရာဘ၀၀ါဒ'"အကိုရေ ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါရှင်။"Mar 16thet naing postedablog postသေပြီး ၇ ရက် (သို့) အန္တရာဘ၀၀ါဒသေပြီး ၇ ရက် (သို့) အန္တရာဘ၀၀ါဒအန္တရာဘ၀၀ါဒ လူတစ်ယောက်သေဆုံးသောအခါ (၇) ရက်မလည်မီ မိမိပိုင်ဆိုင်ရာနေအိမ် (ဘုံ) ထဲတွင် တစ္ဆေသူရဲဘ၀နှင့် ရှိနေပြီး (၇)ရက် ပြည့်မြောက်သောအခါမှသာ မိမိလားမြောက်ရမည့် ဘုံဘ၀အထွေထွေသို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိသည်ဟူသော "အယူဝါဒ" တစ်ခုရှိပါ၏။ယင်းအယူအဆ၌ သက်ဝင်ယုံကြည်သူဦးရေမှာလည်း အထုအထည် ပမာဏကြီးမားလှပါ၏။ကောင်းပြီ လူသေသောအခါ လားရာဂတိတစ်ခုသို့ တိုက်ရိုက်ကူးပြောင်းခြင်းမရှိဘဲ တစ္ဆေသူရဲဘ၀ကို "ကြားခံ" ထားရသည်ဆိုခြင်းမှာ မှန်ကန်ပါသလော။ ယင်းအယူဝါဒသည် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဓမ္မနှင့် ကိုက်ညီပါ၏လော။လူသေပြီးနောက် တစ္ဆေသူရဲဘ၀နှင့် (၇)ရက်နေပြီးမှ တစ္ဆေသူရဲဘ၀ကို ကြားခံထားပြီးမှ ဘုံဘ၀တစ်ခုခုသို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိသည်ဟူသော အယူမှာ "အန္တရာဘ၀၀ါဒ" ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း အန္တရာဘ၀၀ါဒသည် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဓမ္မ နှင့် ဆန့်ကျင်ခြားနားသော အယူဝါဒ ဖြစ်ပါ၏။ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်အရမူ လူကွယ်လွန်သောအခါ စုတိစိတ်ချုပ်ပြီးနောက် နောက်တစ်ဘ၀မှာ ပဋိသန္ဓေစိတ် (ချက်ချင်း) ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ကြားခံဘ၀တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပါချေ။တစ်ခါက ပြင်သစ်ပညာရှင်များက ကျေးဇူးတော်ရှင် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးအား "၀ိညာဉ်သည် အတွယ်ရှိမှ ဖြစ်ပါသလား (သို့) မတွယ်မီ အလွတ်အလျောက်…See MoreMar 16 4
thet naing replied to dimplemit's discussion 'What is the most important thing in life?'"အရေးကြီးဆုံး အရာကတော့ မြတ်စွာဘုရား နောက်ဆုံးမှာကြားသွားတဲ့ စကား မမေ့ ၊မလျှော့ မပေါ့၊ မဆ၊ ပြင်းပြထက်သန် မှန်ကန်သော သတိတရားဖြင့် ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်အောင် သတိပဋ္ဌာန်တရား
လက်ကိုင်ထား၍ နေထိုင်သွားသင့်ပါကြောင်း....။ ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများ…"Mar 14thet naing commented on အရှင်ဝိမလဝံသ's blog post '"ဝမ်းမြောက်ဖွယ်မြန်မာနိုင်ငံ မြို့ကြီးများတွင် ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုများ ပျံ့နှံ့အောင်မြင်လျှက်ရှိ"'"ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်အမျိုးကို ကိုယ်ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နေတာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲ... တစ်မျိုးသားလုံး ပါဝင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်၊ မင်္ဂလာပါ (၉၆၉)...
(၉၆၉) လှုပ်ရှားမှု့ ကြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအထိ အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ...။"Mar 14thet naing commented on မူကြိုဆရာ's blog post '********* ပုရိသ တို့ အကြောင်း *********'"ဖတ်ရှု့ မှတ်သားသွားပါတယ်၊ ဆက်လက်မျှဝေနိုင်ပါစေ...။"Mar 14thet naing commented on dimplemit's blog post 'ရေဘေးသင့်ခန္ဓာ'"ဖတ်ရှု့ မှတ်သားသွားပါတယ်၊ ဆက်လက်မျှဝေနိုင်ပါစေ...။"Mar 14 More... RSS
thet naing's ၏ဓါတ်ပုံများ
9:52am အချိန်April 9, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနဟိတအသင်း၏ (၅)ကြိမ်မြောက် အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ရွက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေသော် …။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977 9:10pm အချိန်February 10, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:293069 5:16am အချိန်January 28, 2013, တွင်Aye Aye Cho မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မောင်လေးရေ အလည်လာခဲ့ပါတယ် စာတွေလည်းအများကြီးဖတ်သွားတယ်နော် ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ..။ 4:59pm အချိန်December 25, 2012, တွင်+ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ 4:39pm အချိန်December 25, 2012, တွင်+ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ 4:39pm အချိန်December 25, 2012, တွင်+ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ 10:34am အချိန်December 25, 2012, တွင်လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာတည်း ဟူသောအကျင့်မြတ်များကိုကျင့်၍ နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည် ကြီးကိုအရောက်လှမ်း နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူး-ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ ကျနော်တို့ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှ မွေးနေ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ...
5:58am အချိန်December 25, 2012, တွင်hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ 5:57am အချိန်December 25, 2012, တွင်hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ 5:57am အချိန်December 25, 2012, တွင်hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မှတ်ချက်ရေးသားတဲ့သူလုံးဝမရှိသေးပါ။
Thet naing's Blog
စင်ကြယ်သော အလှူဒါနဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ
ဒီဘလော့ကို April 18, 2013 တွင်12:14am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
၃၁၃။ အလှူ၏ စင်ကြယ်ခြင်းတို့သည် လေးပါးတို့တည်း။ ငါ့ရှင်တို့ အကြင်အလှူသည် (၁) ဒါယကာ ကြောင့် စင်ကြယ်၏၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့် မစင်ကြယ်၊ ထိုအလှူသည် ရှိ၏။ (၂) အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့် စင်ကြယ်၏၊ ဒါယကာကြောင့် မစင်ကြယ်၊ (၃) ဒါယကာကြောင့်လည်း မစင်ကြယ်၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် ကြောင့်လည်း မစင်ကြယ်၊ (၄) ဒါယကာကြောင့်လည်း… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... သေပြီး ၇ ရက် (သို့) အန္တရာဘ၀၀ါဒ
ဒီဘလော့ကို March 16, 2013 တွင်12:18am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments
အန္တရာဘ၀၀ါဒ လူတစ်ယောက်သေဆုံးသောအခါ (၇) ရက်မလည်မီ မိမိပိုင်ဆိုင်ရာနေအိမ် (ဘုံ) ထဲတွင် တစ္ဆေသူရဲဘ၀နှင့် ရှိနေပြီး (၇)ရက် ပြည့်မြောက်သောအခါမှသာ မိမိလားမြောက်ရမည့် ဘုံဘ၀အထွေထွေသို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိသည်ဟူသော "အယူဝါဒ" တစ်ခုရှိပါ၏။
ယင်းအယူအဆ၌ သက်ဝင်ယုံကြည်သူဦးရေမှာလည်း အထုအထည် ပမာဏကြီးမားလှပါ၏။
ကောင်းပြီ လူသေသောအခါ လားရာဂတိတစ်ခုသို့ တိုက်ရိုက်ကူးပြောင်းခြင်းမရှိဘဲ တစ္ဆေသူရဲဘ၀ကို "ကြားခံ" … ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ပရိနိဗ္ဗာန် နှင့် ဥပါဒါန်
ဒီဘလော့ကို March 4, 2013 တွင်9:54pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
‎ပရိနိဗ္ဗာန် နှင့် ဥပါဒါန်
သံယုတ်ပါဠိတော်မှာ သိကြားမင်းက မြတ်စွာဘုရားကို လျှောက်ထားတာ ရှိပါတယ်။ " လောကမှာ တစ်ချို့ ပုဂ္ဂိုလ် များဟာ ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုကြတယ်။ တစ်ချို့ ကျတော့ ပရိနိဗ္ဗာန် မပြုကြဘူး၊ အဲဒါဘာကြောင့် ပါလဲဘုရား " လို့လျှောက်ထားပါတယ်။
ဒီအခါမှာ မြတ်စွာဘုရားက ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ကိုပဲ တိုတိုဟောပါတယ်။ " ဥပါဒါန် မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် သေရင် ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုတယ်၊ ဥပါဒါန် ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သေရင် ပရိနိဗ္ဗာန် မပြုပါ " လို့ဖြေကြားပါတယ်။
ဒါဟာ… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ပဏ္ဍိတာရာမ သာသနာ့ရိပ်သာဆိုတာ
ဒီဘလော့ကို March 1, 2013 တွင်12:57am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
“ပဏ္ဍိတ” ... ဆိုတာ..
အကျိုး ရှိ မရှိ သင့် မသင့်ကို ချင့်ချိန်နိုင်တဲ့ ပညာရှိ ပုဂ္ဂိုလ်ကို “ ပဏ္ဍိတ ” လို့ခေါ်တယ်။ အကျိုး ရှိ မရှိ သင့် မသင့်ကို ချင့်ချိန်နိုင်တဲ့ ပညာရှိရင် လူပင်ငယ်သော်လည်း “ ပဏ္ဍိတ ” ပဲ။ လူ လတ်လည်း “ ပဏ္ဍိတ ” ပဲ။ လူကြီးလည်း “ ပဏ္ဍိတ ” ပဲ။အမျိုးသားလည်း “ပဏ္ဍိတ” ပဲ။ အမျိုးသမီးလည်း “ ပဏ္ဍိတ ” ပဲ။ သိက္ခာရှင်လည်း “ပဏ္ဍိတ” ပဲ။ ကိုရင်လေးလဲ “ပဏ္ဍိတ” ပဲ။ ဥူးဇင်းလည်း “… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဒီနေရာမှ ဗုဒ္ဓစာပေများတင်ရန်...
အားလုံးကြည့်ရန်... ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺ မှ(ကြိုဆိုပါတယ်)
မြတ်သွင်ကို ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Nilar Htet Htet Aung ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Top News · Everything Nilar Htet Htet Aung commented on dimplemit's blog post 'ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....'"Thanks for sharing. I agree your thinking of the most important thing in life. I'll try my…"7 minutes agodimplemit posted blog postsဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....အတိတ်မှသမထနှင့်ဝိပဿနာအထုံတို့ပစ္စုပ္ပန်တွင်အကျိုးပေးပုံ46 minutes agoashinvishittathara commented on နီစံ (အနီ)'s group 'အဘိဓမ္မာ ဌာန'"ဒီနေရာကိုလာလည်ခွင့်ရလို့အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်"1 hour agoashinvishittathara joined နီစံ (အနီ)'s groupအဘိဓမ္မာ ဌာန-အဘိဓမ္မာ သင်ယူလေ့လာရန် -အဘိဓမ္မာ ရေးရာ ဆွေးနွေးနှီးနှောဖလှယ်ရန်See More1 hour ago 19
kham liked မူကြိုဆရာ's blog post 'မေတ္တာလေ.ကျင်.ခန်း'1 hour agoမတင်တင်မိုး commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်သင့် အချက်များ'"Thanks..."1 hour agoHtain Lin Oo liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် ဒေသနာဆိုသည်မှာ'2 hours agoကောင်းမြတ်ဇော် commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post '(၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း'"စင်္ကာပူမှ အလှူရှင်တဦးမှ စင်္ကာပူဒေါ်လာ $၅၀ လက်ခံ ၇ရှိပါသည်။ ယခုလို စေတနာသုံးတန် ပြဠာန်းကာ လှူဒါန်းမူ…"3 hours agoလှိုင်ကျော်ထွေး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post '(၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း'"အလှူရှင် မနန်းယုမှ လှူဒါန်းငွေကျပ်-၂၀၀၀၀/-(ကျပ် နှစ်သောင်းတိတိ) ကို လက်ခံရရှိပါတယ် ခင်ဗျာ..။ယခုလို…"3 hours agoနန်းယု liked မူကြိုဆရာ's blog post 'မေတ္တာလေ.ကျင်.ခန်း'4 hours agoမူကြိုဆရာ posted blog postsအနာထပိဏ် နဲ့ ၀ိသာခါ…ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်“… ရဟန်းကို ဘာကြောင့် ရိုသေလေးစားရှိခိုးထိုက်သလဲ …”6 more…4 hours agoတေးအလင်္ကာ သည်profileကိုပြုပြင်သွားသည်။5 hours ago More... RSS